Otu esi eji RAM niile na Windows 10 | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | 08/10/2021 12:00 | Sistemụ arụmọrụ, Windows
Mgbe kọmputa gị bidoro nwayọ karịa ka ọ dị na mbụ, ị na -amalite ịkparịta ụka na ngwanrọ kọmputa gị ka ị nwaa nyeghachi gị afọ ole na ole nke ntorobịa. Ị na -atụlekwa ohere nke ịgbanwe processor ma ọ bụ ịgbasa RAM, ka ọ nọrọ afọ ole na ole ọzọ.
Agbanyeghị, nke a abụghị azịza kacha mma mgbe niile, ebe ọ nwere ike bụrụ na kọmputa gị enweghị ike iji RAM niile ị wụnye ya maka ebumnuche dị iche iche metụtara ma ngwanrọ na ngwaike kọmputa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu esi eji RAM niile na Windows 10 M na-agba gị ka ị nọgide na-agụ.
1 Kedu ụdị Windows anyị wụnyela
2 Otu esi eji RAM niile
2.1 Nzọụkwụ 1 - Chọpụta nkọwapụta
2.2 Nzọụkwụ 2 - Lelee ụdị Windows anyị wụnyela
2.3 Nzọụkwụ 3 - Wụnye Windows 10 64 -bit
3 Ọdịiche dị n'etiti ibe 32 na 64
Kedu ụdị Windows anyị wụnyela
Windows 10 bụ sistemụ arụmọrụ ikpeazụ nke Windows wepụtara na ụdị abụọ: 32-bit na 64-bit. Na-enweghị ịbanye na teknụzụ nke eleghị anya ị gaghị aghọta, amụrụ ndị nhazi 64-bit site na mkpa jiri ebe nchekwa karịa na kọmputadị ka ndị nhazi 32-bit nwere ike ijikwa naanị 4 GB.
Ndị nhazi 32-bit nwere ike ijikwa sistemụ arụmọrụ na ngwa 32-bit. Ọ bụ ezie na nhazi 64-bit nwere ike ịbụ jikwaa ma sistemụ 32-bit na 64-bit.
Windows 10 bụ ụdị Windows kachasị ọhụrụ nke dị na ụdị 32-bit na 64-bit iji gboo mkpa niile nke ndị ọrụ, agbanyeghị na Windows 11, Microsoft emeela nzọụkwụ ọzọ iji manye ndị ọrụ ịmalite kwalite ngwa kọmputa gị ochie ọ dịkwa naanị na ụdị 64-bit.
Otu esi eji RAM niile
Ozugbo anyị matara ịrụ ọrụ nke ndị nrụpụta 32-bit na 64-bit na sistemụ arụmọrụ yana adịghị ike ha, oge eruola ịmara ma otu esi eji RAM niile na Windows 10.
Nzọụkwụ 1 - Chọpụta nkọwapụta
Ihe mbụ anyị kwesịrị ịma bụ mara oke RAM nke akụrụngwa anyị rụnyere. Iji mata nkọwapụta akụrụngwa anyị niile, anyị ga-eji ngwa CPU-Z, ngwa efu nke anyị nwere ike ibudata na nke a. njikọ.
Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike ịme usoro a site na nhọrọ nhazi Windows, ozi gbasara oke RAM nwere ike iduhie anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ụdị 32-bit.
Ozugbo anyị ebudatara ma wụnye ngwa na kọmputa anyị, anyị na -egbu ya. Usoro a ga -ewe sekọnd ole na ole, ngwa nke ngwa a na -eji anakọta nkọwa akụrụngwa niile ọ ga -egosikwa anyị tebụl nwere taabụ yana nkọwapụta akụrụngwa anyị niile.
Dị ka ozi anyị nwere mmasị ịmara na mbụ bụ ebe nchekwa etinyere, pịa taabụ na ebe nchekwa. Na ngalaba izugbe, na ngalaba nha, egosiri RAM nke ị rụnyere n'anụ ahụ. Na kọmputa m ọ bụ ihe dịka 16GB.
Ọ na -egosikwa anyị ụdị ebe nchekwa (n'ọnọdụ m DDR3) yana ọsọ ugboro 800 MHz (798.1). Ozi a dị mkpa ịmara ọ bụrụ na anyị eme atụmatụ ịgbasa ebe nchekwa otu anyị, ebe ọ bụ na anyị ga -azụta otu ụdị ebe nchekwa nke anyị rụnyere ka anyị nwee ike gbasaa ike ya, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwekọ.
Ozi ndị ọzọ anyị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbasa ebe nchekwa RAM nke akụrụngwa anyị bụ ịmara ọ bụrụ na anyị nwere oghere efu (oghere) iji gbasaa ebe nchekwa ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ga -azụta modulu ọhụrụ nwere ọtụtụ ebe nchekwa. Enwere ike ịhụ nke a site na taabụ, na ngalaba Nhọrọ oghere ebe nchekwa na ịpị na ndọpụta.
Na kọmputa m enwere 16 GB nke RAM yana dịka ngwa ahụ na -egosi anyị, kewara m n'ime modul 8GB abụọ. Oghere ọ bụla (oghere iji tinye modulu ebe nchekwa) nwere modul 8GB. Ọ bụrụ na m chọrọ ịgbasa ebe nchekwa ahụ, ọ bụrụ na bọọdụ ahụ anabata ya, m ga -azụta modulu 16GB abụọ maka mkpokọta 32GB.
Mana tupu anyị ewepụta onwe anyị ịzụta ebe nchekwa akọwapụtara nke otu anyị chọrọ, anyị ga -amatarịrị ikike ebe nchekwa kachasị nke bọọdụ na -akwado.
Na taabụ CPU, a na -egosipụta bọọdụ na ụdị ihe nrụpụta. Site na ozi a, anyị ga -aga na webụsaịtị wepụta ya mara oke ebe nchekwa ọ na -anabata.
Nzọụkwụ 2 - Lelee ụdị Windows anyị wụnyela
Ozugbo anyị chọpụtarala ihe bụ ebe nchekwa anụ ahụ kọmputa anyị nwere, ọ bụrụ na anyị chọrọ irite uru na ebe nchekwa niile dị na Windows 10, anyị ga -amatarịrị ụdị Windows anyị rụnyere. Iji chọpụta ụdị nke Windows 10 anyị arụnyere, anyị ga -eso usoro ndị akọwapụtara n'okpuru:
Nke mbụ, anyị ga -enwerịrị nhọrọ nhazi Windows site na cogwheel dị na menu mmalite ma ọ bụ site na ụzọ mkpirisi keyboard igodo Windows + i.
Ọzọ, pịa System.
N'ime sistemụ, na kọlụm aka ekpe, pịa Banyere:
A ga -egosi nkọwa niile nke akụrụngwa anyị n'okpuru yana ụdị nke anyị rụnyere.
Anyị ga -elele ụdị ngalaba sistemụ. N'ebe a, ọ ga-egosi ma anyị nwere ụdị 64-bit ma ọ bụ 32-bit.
Nzọụkwụ 3 - Wụnye Windows 10 64 -bit
Ọ bụrụ na kama igosipụta sistemụ arụmọrụ 64-bit ọ na-egosi sistemụ arụmọrụ 32-bit, ọ pụtara na Ụdị Windows na -amachi ojiji ebe nchekwa.
Ka ọ were ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ebe nchekwa anụ ahụ niile dị na kọmpụta anyị, anyị ga-etinyerịrị ụdị 64-bit nke Windows 10.
Ọdịiche dị n'etiti ibe 32 na 64
Na mgbakwunye na njedebe kacha na 4 GB nke ebe nchekwa nke ndị nhazi 32-bit nyere, enwere usoro mgbochi ọzọ metụtara ya, dịka ọmụmaatụ mgbe emepere ọtụtụ ngwa ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na anyị mepee ọtụtụ ngwa ọnụ, ole RAM anyị ga -achọ ọ dị elu karịa 4 GB nke ụdị 32-bit na-enye anyị. Ụdị 32-bit nwere ike iji karịa 2 GB n'otu ngwa mepere emepe ebe sistemụ 64-bit nwere ike iji ruo 128 GB nke Ram.
Mgbe Ngwa 32-bit na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ 64-bit, nke ọzọ anaghị eme, ọzọ n'ihi oke ebe nchekwa enwere ike ijikwa ngwa mepere emepe.
Ụdị 64-bit nke Windows na ngwa, enweghị ike itinye ya na kọmpụta nwere ihe nrụpụta 32-bitAgbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịwụnye ụdị 32-bit na ndị nrụpụta 64-bit, n'agbanyeghị na ọ nweghị onye na-eme ya n'ihi na ọ na-egbochi ohere ịnweta ebe nchekwa yana ọnụọgụ ndị nrụpụta ọ nwere ike iji, yana ekweghị ka anyị jiri 64-bit ngwa. ibe n'ibe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi eji Windows 10 Ram niile